Dhageyso:-Laftagareen oo u digay dadka diidan Maamulkiisa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed (laftagareen) ayaa sheegay inay jiraan dad diidan maamulkiisa,kuwaas oo kazoo horjeeda horurmarka Koonfur Galbeed.
Isaga oo Warbaahinta kula hadlayay Magaalada Baydhabo ayuu sheegay in dalka Jabuuti oo uu dhawaan booqasho ku tegay uu u balan qaaday ka qyeb qaashada dhismaha iyo qalabeynta Isbitaalka Magaalada Marka iyo dekadda degmada Baraawe.
Madaxweyne laftagareen ayaa waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray inay jiraan dad ka naxayo oo aan jecleen horumarka Reer Koonfur Galbeed,hayeeshee dadkaasi aan dheg jalaq loo siin doonin sida uu hadalka u dhigay.
Kheyre oo sheegay in Shabaab 11 jeer weerareen Waddo uu dhismo ka socdo